"दुइ कदम संगै हिडौ छुट्टिनु त छदै छ" साथी !
Sunday, 22 October 2017 08:35
-डिल्ली राम अम्माई / बेल्जियम
आखिर मृत्यु कसैलाई पनि छोड्दैन । चाहे त्यो धनि होस्, माथिल्लो ओहदामा पुगेको अभियन्ता होस् , नेता होस् वा गरिब , अपाङ्ग , रोगी र सिमान्तकृत वर्कको किसान नै किन नहोस । तर बाचुन्ज्याल सबैसंग मिलिजुली गरेर भाबना र समबेदना समेत एक आपसमा बाडेर बस्दा अबश्य आनन्द आउँछ । स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाएको गीतको मूल भावमा रहेर राखिएको सृसकबारे यो बाहेक अर्को अर्थ निकाल्न सकिदैन ।
हामी अहिले दुर परदेशमा बसेका छौ । सकी नसकी हामीले आँफुलाई यहाको सामाजिक प्रवाहमा मौलिक संस्कृति, बिचार र माटो प्रतिको कर्तव्यलाई बचाएर समाहित गराउदै लगेका छौं । आन्तरिक रुपमा नेपाली समाजलाई संगठित गर्दै पनि लागेका छौं । अव्यस्थित नै भएपनि सामाजिक गतिविधिहरुलाई आफ्नो नेपाली मौलिकता दिने प्रयत्न समेत गरेका छौं । यहाँको दोश्रो तेश्रो पिढीका सन्ततिहरुलाई ब्याक्तिगत रुपमा भएपनि नेपाली भाषा र संस्कृतिसंग परिचित गराउने जमर्को गरेका छौं । त्यो अत्यन्त प्रसंसनिय तर अनिबार्य कार्य हो । त्यसलाई अहिलेसम्म साझा संगठनको अबधारणा सहित सन् २००३ बाट स्थापित एनआरएनएले कुन रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो र गरिरहेको छ त्यो छलफलको बिषय बनाउनु जरुरि देखिन्छ ।
अर्को तर्फ एनआरएनएले अहिलेसम्म आठौँ महाधिवेशन गरि सकेको छ । यो अधिवेसनको बन्दसत्र भित्र नेपाली समाजको आन्तरिक र बाह्य सम्बन्ध र समाज भित्रका प्रमुख समानता र अन्तरविरोधहरूबारे समीक्षात्मक बहस केन्द्रित हुनु जरुरी थियो । गैर आबासीय नेपाली संघको आठौ महाधिबेशनको बन्द सत्रमा डायस्पोराको नेपाली समाजलाई ब्यबस्थित गर्नकोलागि यी मत्वपुर्ण सवालबारे त्यति बहस नपुगेको गुनासाहरु सुन्नमा आएका छन् । तर त्यसलाई प्रत्यक देशका क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिषदहरुले क्रमश सम्बोधन र हाल खोज्दै जान जरुरी छ ।
अर्को कुरा अहिले अधिवेशनले अन्तराष्ट्रिय समिति निर्वाचित गरिसकेको छ । मत परिणाम हेरेर क्रिया प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक संजाल र अन लाइनमा देख्न सकिन्छ । त्यो कुन हदसम्म स्वाभाविक हो वा हैन आफ्नो ठाउँमा होला । हार्नेले किन हारे जित्नेले कसरी जिते वा मतदाताको मनोविज्ञान कस्तो रह्यो ? सबै प्रतिक्रियाहरुको आफ्नो ठाउँमा महत्व पनि रहला । तर चुनाबको परिणामलाई हेरेर संगतको निर्धारण गर्ने , जित्नेले हार्नेको सबल पक्षलाई अभियानमा समाहित नगर्ने र हार्नेले असहयोगको मनोरोगलाई पालियो भने हामी कहिँ पनि पुग्न सक्ने छैनौं । आफ्ना हारहरुलाई प्रतिनिधिहरुको जिम्मा लगाइदिदा आफ्ना सन्तप्त पिडा केहि क्षणका लागि धिमा होलान । तर त्यस खालको प्रवृतिले हाम्रो संस्थागत बिकास र समाज बिकासको चक्रिय सन्तुलनलाई अकल्पनीय क्षति पुर्याई रहेको हुन्छ । त्यसैले हामी त्यो हारजितको प्रतिसोधपूर्ण मनोदशाबाट उत्रनु श्रेयष्कर हुन्छ । बिध्वानहरुले अक्सर भनेको सुनिन्छ ,"आफ्ना गल्ति औल्याइदिने ब्याक्ति र त्यो अनुरुप सजाय दिने समाजलाई आफ्नो सहृदयी बनायौ भने कुनै पनि पहाडको चुचुरोमा पुग्नलाई भाग्यले पनि रोक्न सक्दैन ।"
चुनाबको वरपरका सबै दृश्यहरुको विश्लेषण गरियो र सबै तिरबाट धेरै कुराहरु आए । गैर आबासीय नेपाली संघको आठौ महाधिबेशनले गरेको चुनाब सहित सबै चुनाबहरु, नेतृत्व चयनका अन्य प्रक्रियाहरूमा चेतनशील मतदाताहरुले पहिल्यै एउटा दृष्टिकोण बनाइसकेका हुन्छन । त्यसमा उमेद्वारको सर्वाङ्ग समिक्षा मात्र हैन,उसका पुराना सोच,कार्य शैली र बिगतमा गरेका राम्रा नराम्रा कामहरुको समिक्षा पनि समेटिएको हुन्छ ।
परिणाम नचिताएको आयो भन्ने केहीलाई लागेको हुनसक्छ, त्यो खालको प्रतिक्रिया पनि सुनियो तर त्यो कदापि हैन । स्वाभाविक बिकासक्रमको क्रमबद्धतालाई पछ्याएर जाँदा,पुरानो योग्यता र बिरासतहरुलाई सम्मान गरेर जाँदा, समयको आवाजलाई बुझेर जाँदा र विषमताका साँघुरा दायरालाई नाघेर जाँदा प्राय परिणाम सकारात्मक उन्मुख हुन्छ । बिषेस परिस्थितिमा गरिने क्रमभंग भनेका क्रमिक गतिको योगले गुणात्मक रुपमा परिवर्तन चाहेको बेला बाहेक अनुत्पादक हुन सक्छ । आखिरी गैर आबासीय नेपाली संघको आठौ महाधिबेशनमा क्रमभंगको प्रयासलाई मतदाताले साथ् दिएनन । जसले निबर्तमान अध्यक्षको अतुलनिय समर्पणमा थोरै दाग लगाइदियो भने हार्नेको सम्भावित बिजयको पर्खाइलाई बर्षौ पर धकेलिदियो । अब समय चक्रले अर्को कार्यकालको रुपलाई अनेत्रै मोडी दिन सक्छ । नेतृत्वको लागि अदम्य अभ्यास र क्षमता सहित नयाँ उमेद्वार प्रवेश गर्ने द्वारलाई चाहेर पनि कसैले रोक्न सक्दैन ।
त्यसैले भनिन्छ ,- समय ब्याक्तिको चाहना भन्दा बलवान हुन्छ । जसले समय र युगको आवाज सुन्न र बुझ्न सक्दछ त्यो योग्यतामा अब्बल र अभ्यस्त बन्दै जान्छ भने आवेग र मनोगत निर्देशनमा बिश्वास गर्नेको अनिष्ट प्रति सहानुभूति मात्र राख्न सकिन्छ ।
यी सबै प्रसङ्ग गैर आबासीय नेपाली संघको आठौ महाधिबेशनमा भए गरेका अनेकन प्रयाससंग जोड्न खोजिएको हो । त्यसले धेरैलाई अनुभूतिजन्य अनुभब र भबिस्यको लागि शिक्षा दिएको छ । त्यस्ता धेरै तथा बहुआयामिक समिक्षाहरु छन् । खर्चिला अभ्यासको बिरुद्ध त अब अभियान नै चलाउनु पर्ने जरुरी छ । आर्थिक क्षमता मात्रले अन्य क्षमतालाई अभियानमा मौन निषेध नै गरेको छ । त्यो सम्मेलनको किनबेच हुने संस्कार अदृश्य नियमको रुपमा बिकसित हुने खतरा झन् जब्बर बन्ने लक्षण देखिएको छ ।
केहि समय अघिको कुरा हो , कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार दिल भुषणले गैर आबासीय नेपाली संघको आठौ महाधिबेशनबाट
नब निर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टलाई अन्तर्वार्ताको क्रममा एनआरएनको नेपालमा लगानीबारे एउटा प्रस्न सोधेका थिए । उत्तर दिने क्रममा अध्यक्षलाई अलिक बढी बल गर्नु पर्यो । उनले केहि डायस्पोराका ब्याबशायीहरुले गरेका ब्याक्तिगत लगानी बाहेक उल्यख्य उदाहरण दिन सकेनन । अवस्था उनले बताए जस्तै हो । लगानी नभएको हैन भएको छ तर सामुहिक रुपमा डायस्पोराका साना ठुला सबै समेट्ने गरि लगानी गर्ने प्रयास गरिएको छैन । पन्ध्र बर्षे संस्थाको उमेरमा लगानीको क्षेत्रमा त्यो न्युन नै हो ।
अन्त्यमा पबित्र राष्ट्रप्रेमी मनोविज्ञान निर्माणको साथै आपसी मैत्रीपुर्ण एकता सहित मुर्त योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै सामुहिक लगानीको वाताबरणको लागि सबै लाग्नु आवस्यक छ । सबै एनआरएनहरुले एक संकल्प सहित आफ्ना सन्तति र आफ्नो भविष्यको लागि अब नयाँ शिराबाट' नयाँ अभ्यास शुरु गरौ । स्वर सम्राटले भनेझै "रात त्यसै ढल्कँदै छ , एनआरएनको कुरा गर, योजनाको कुरा गर ।"
More in this category: « एन आर एन विश्व सम्मेलन : भिजन २०२० र एजेण्डाको मोलतोल, २०० डलरमै बिकाउ	बेल्जियममा नेपालीले कोरेको आङ्ग नै सिरिङ्ग पार्ने संघर्षको कथा »